जडीबुटी : आर्थिक समृद्धिको आधार | Ratopati
personडा. डिला संग्रौला (पन्त) exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
वन विभागले दिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल वार्षिक ४ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन जडीबुटी उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ । यसरी नेपाल जडीबुटी नै जडीबुटी भएको देश हो । गरिब तथा निम्न आय भएका जनतालाई जडीबुटी व्यवसायमा आश्रित गराई उनीहरुमा लाभ पुर्याउन सकिन्छ ।
यसरी नेपालमा वार्षिक ८० हजार टनभन्दा बढी जडीबुटी हुने गर्छ । त्यसको ९० प्रतिशत निर्यात हुने गर्छ । यसमा पनि नेपाल उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा धेरै निकासी हुने देखिन्छ । जडीबुटीको मुख्य बजार भनेको ६० प्रतिशत उत्पादन चीनमा निर्यात हुँदै आएको छ । जडीबुटीबाट प्रशोधित सुगन्धित तेल फ्रान्स, जर्मनी, इटालीलगायत देशमा जाने गरको छ । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिका कम्पनीहरु कम भएका कारण नेपालका उद्योगहरु उत्पादन हुने जडीबुटी भरमग्दुर प्रयोग हुन सकेको छैन । वन विभागले दिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल वार्षिक ४ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन जडीबुटी उत्पादन हुँदै आएको देखिन्छ । यसरी नेपाल जडीबुटी नै जडीबुटी भएको देश हो । गरिब तथा निम्न आय भएका जनतालाई जडीबुटी व्यवसायमा आश्रित गराई उनीहरुमा लाभ पुर्याउन सकिन्छ । नेपाल एक प्रकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश भएकाले धेरै प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । जडीबुटीको माध्यमबाट नै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी आर्थिक रूपले मुलुकलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।
नेपाल जैविक विविधताको धनी देशका रूपमा विशिष्ट पहिचान बोकेकाले यहाँका हिमाली क्षेत्र तथा पहाडी भागमा पाइने जडीबुटी तथा सुगन्धित बोटबिरुवाहरु महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । नेपालमा २ हजारभन्दा बढी बहुमल्य जडीबुटीहरु प्रशस्त तेलजन्य वनस्पती रहेका छन् । जुन ग्रामीण जनताको स्वास्थ्यका साथै उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोत मात्र भएर हुँदैन यसका दिगो उपयोग तथा आर्थिक सामाजिक समृद्धिमा परिचालन गर्नेतर्पm दीर्घकालीन सोचको व्यवस्था सरकारले गर्नु आवश्वक छ । यसरी नेपालमा उच्च औषधीय गुण भएका असङ्ख्य जडीबुटी भए पनि सो प्रयोगमा फाइदा लिन सकेका छैनौँ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिमा औषधीय गुण अत्यधिक रूपमा पाइने हँुदा जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढदो माग रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा डरलाग्दो रूपमा चुलिँदै गएको अवस्थामा जडीबुटीले अन्तराष्ट्रिय बजार पाउनु नेपालका लागि राम्रो पक्ष हो । तर आज विदेश निकासका लागि ठिक्क पारिएको मूल्यवान जडीबुटी क्वारेन्टाइन जाँचको नाममा निक्कै समयदेखि विभिन्न नाकाहरुमा थुप्रिएका छन् । वन मन्त्रालयले त्यसको सङ्कलन, ओसार, पसार र निकासीमा रोक लगाएपछि नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, महेन्द्रनगर, भैरहवा, कैलाली, काँकडभित्ता अदिमा निकासी रोकिएको छ । यसरी नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभाग जडीबुटीको भण्डार रूपमा रहेको छ ।
यस भेगमा रहेका नेपाली नागरिकहरु जडीबुटीको सङ्कलन, उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण कार्यमा संलग्न भई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पनि पाएका छन् । तर नेपालमै उत्पादित र सङ्कलित सबै जडीबुटी क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्थाका कारणले जडीबुटी निकासी अवरोध उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्पm जडीबुटी यतिकै खेर गई नोक्सानी हुने र अर्कोतर्पm नेपालीहरु रोजगारीको अवस्थाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैले सङ्घीय संसदमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले क्वारेन्टाइनको उचित प्रवन्ध गर्दै जडीबुटीको उचित निकासीलाई सहज बनाउन र सरकारको ध्यानकर्षण गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यस बारेमा सदनमा छलफल हुन अति आवश्यक छ । क्वारेन्टाइन जाँचको नाममा नाकाहरुमा जडीबुटी रोकिँदा यसबाट देशले प्राप्त गर्ने आर्थिक लाभबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । त्यसैले जडीबुटी आर्थिक समृद्धिको आधार हो । यसको उपयोग, वितरण र पैठारी गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(लेखक नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
#डा. डिला सङ्ग्रौला#जडीबुटी